Blog ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Izinhlelo kanye nezicelo
Izincwadi ze-Instagram ukuze ukopishe futhi unamathisele
Thenga Abalandeli! 1. Bhala umbhalo owufunayo ebhokisini. 2. Khetha amafonti noma izinhlamvu othanda kakhulu. 3. Kopisha bese unamathisele ku-Instagram yakho ye-Instagram okwamanje ingenye yezokuxhumana nabantu enokuxhumana kakhulu usuku nosuku, bayanda abantu abasebenzisa lolu hlelo lokusebenza ukufinyelela abaningi ... ufunde kabanzi
Yaziwa ngamagama amakhulu we-Instagram
Thenga Abalandeli! Enye yezinto ezibaluleke kakhulu lapho une-akhawunti ye-Instagram yigama, lokhu kubaluleke kakhulu ngoba kuyisisekelo esiyisisekelo se-akhawunti oyiphethe. Kungalesi sizathu namuhla sizokunikeza izeluleko ezinhle ukuze ube namagama amahle kakhulu we-Instagram ku-… ufunde kabanzi
Ngena ngemvume ku-Instagram ngaphandle kwekhodi yokuqinisekisa
Thenga Abalandeli! Amakhodi okuqinisekisa angase akuphathe kabi. Njengoba, kuyamangaza ukuthi lokhu kuyinkinga esakazeke kakhulu ezinhlelweni ezahlukene. Futhi kungenxa yokuthi inkundla yezokuxhumana edumile ye-Instagram, inalolu hlobo lwenkinga oluthinte abasebenzisi abaningi, ababona ukuthi i-akhawunti yabo injani ... ufunde kabanzi
Lapho i-Instagram ikutshela ukuthi umsebenzisi akatholakali
Thenga Abalandeli! Kwenzekani ngempela lapho i-Instagram ikutshela ukuthi umsebenzisi akatholakali? Impela kwenzeke kuwe ukuthi uye kuphrofayili yomngani ku-Instagram futhi kuvela lowo mlayezo ocasulayo; kunezizathu eziningana zokuthi kungani lokhu kwenzeka. Lapha kulesi sihloko sizokhuluma ngezizathu ezingase zibe khona lapho... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! I-Instagram uhlelo lokusebenza lwe-BOM lwezokuxhumana, yiyona ekhule kakhulu eminyakeni yamuva nje, yafinyelela amakhulu ezigidi zabantu abayisebenzisayo kubasebenzisi bayo. Ekuqaleni kwayo bekuwuhlelo lokusebenza lokulayisha, ukwabelana ngezithombe namavidiyo, kusukela ngo-2012 lapho ithengwa ... ufunde kabanzi
Ngubani osindisa izithombe zami ku-Instagram?
Thenga Abalandeli! Ku-Instagram sabelana ngezithombe namavidiyo amaningi, ngokuvamile sithanda ukubona ukuthi abanye abantu bayasabela kokuqukethwe esikulayishayo, okubonisa ukuthi bayakuthanda noma babeka amazwana kukho. Kepha ukwazi ukuthi ubani ogcina izithombe zami ku-Instagram kungomunye wemibuzo abaningi bethu abaqhamuka nayo ngenkathi sisendaweni yesikhulumi. Kwesinye isikhathi kuyenzeka... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Ngaphezu kwesenzo senhlonipho emsulwa, ukuthumela umlayezo omuhle nowangempela wosuku lokuzalwa kufanele kube isenzo esivela enhliziyweni. Ngendlela yokuthi ukuze ufinyelele umgomo wakho wokuba nomthelela, wokujabulisa lowo othandekayo, ngizokuqondisa kulesi sihloko,... ufunde kabanzi
Ngena ngemvume ku-Instagram ngaphandle kwephasiwedi
Thenga Abalandeli! I-Instagram ingelinye lamanethiwekhi omphakathi aziwa kakhulu futhi asetshenziswayo okwamanje, nawo anezigidi zabasebenzisi. Basebenzisa le nkundla nsuku zonke. Okuhlala kusungula izinto ezintsha, ukunikeza abasebenzisi bayo uhlelo lokusebenza olukhangayo kanye nolwazi oluya ngokukhululeka. Noma kunjalo,… ufunde kabanzi
Ungayisusa kanjani i-akhawunti ye-Instagram elondoloziwe
Thenga Abalandeli! Kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza, ukuthepha ukuphuma kuzokukhipha ku-akhawunti yakho. Ukuze uphinde ungene ngemvume, uzodinga ukufaka imininingwane yakho yokungena futhi, ngaphandle kwalapho usebenzisa isici sokugcwalisa okuzenzakalelayo kwe-Oreo kumadivayisi e-Android. Kepha izinto zihlukile nge-Instagram. Ukukugcinela ubunzima bokukhumbula… ufunde kabanzi
Ungahambisa kanjani izithombe ze-Instagram
Thenga Abalandeli! Ezikhathini zamanje, abasebenzisi abaningi bachitha isikhathi ekubeni nephrofayili ekhangayo. Impela, iphrofayili emangazayo, ecocekile futhi enobuciko iheha inani elikhulu labalandeli. Ngaphezu kwalokho, kungashiwo ukuthi ikhasi lephrofayela yisithombe nobuso okwethulwa kwabanye abasebenzisi. Ibhalwe ngu… ufunde kabanzi
Lapho i-Instagram isho iphutha lenethiwekhi elingaziwa
Thenga Abalandeli! Kulezi zinsuku, kunesidingo esikhulu ngenxa yokusebenzisana njalo nokusetshenziswa kwezinkundla zokuxhumana emhlabeni. Lezi zisetshenziselwa ukuxhumana nabangani, ukuzwakalisa imizwa nokwabelana nomphakathi ohlala kuwo cishe. Kungakho, lapho i-Instagram ithi iphutha lenethiwekhi elingaziwa, akuyona ... ufunde kabanzi
Ungasusa kanjani iziphakamiso zokucinga ze-Instagram
Thenga Abalandeli! Ungazisusa kanjani iziphakamiso zokucinga ze-Instagram, lolu hlelo lokusebenza kanye nenkundla yokuxhumana nabantu ngokuzenzakalelayo, kukhombisa iziphakamiso zamanye amaphrofayili okufanele uwalandele ngokusho kwabantu osuvele ubalandelayo kanye nosesho olwenziwe. Uma ungasithandi lesi sici, yazi ukuthi kungenzeka ukususa iziphakamiso zosesho lwe-Instagram. Zikhathi zonke … ufunde kabanzi
Ungayithola kanjani kabusha i-akhawunti ye-Instagram ngaphandle kwe-imeyili
Thenga Abalandeli! Izinkundla zokuxhumana ziye zanda ekudumeni eminyakeni yamuva nje. Ngale ndlela, inani labasebenzisi bayo likhula njalo. Enye yezinkundla zokuxhumana ezisetshenziswa kakhulu yi-Instagram. Inkundla ihehe abantu abaningi ngamathuba okuthumela amavidiyo nezithombe futhi yengeza ... ufunde kabanzi
Lapho i-Instagram iphakamisa wena bangani
Thenga Abalandeli! Iziphakamiso ku-Instagram zingenye yezinto ezibukwa kakhulu ezinkundleni zokuxhumana. Futhi kungenxa yokuthi, uhlala ubhekisisa lapho i-Instagram iphakamisa abangani. Kodwa-ke, nakuba inamaphuzu ayo amahle, kube nezikhalazo ezivela kubasebenzisi, njengoba lezi zincomo zivela ngokungenangqondo ku ... ufunde kabanzi
Ungathandwa kanjani ku-Tik Tok Funda manje!
Thenga Abalandeli! I-Tik Tok inkundla yezokuxhumana eyayibizwa ngokuthi Umculo futhi njengakunoma iyiphi inkundla yedijithali, ukuxhumana kwayo okuhlala njalo nokuhlala phakathi kwabasebenzisi bayo kuyingxenye ebalulekile yomsebenzi wayo, futhi kuyingxenye ebalulekile yokukhula kwama-akhawunti ababambiqhaza bayo. Ukuze uhlale usebenza futhi uthuthukise iphrofayili yakho ezinkundleni zokuxhumana... ufunde kabanzi
Lawa ngamacebo amahle kakhulu angaqondile we-Instagram
Thenga Abalandeli! I-Instagram iyinkundla enhle yokusebenzisa zonke izinhlobo zemisho noma izeluleko ofuna ukuzisho komunye umuntu. Amacebo ngokuvamile asekelwe emishwaneni emincane enemilayezo ebhekisela kulokho okucabangayo ngomuntu kodwa angakusho ngokuqondile. Lezi zinhlobo zemisho zingaba... ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! izinhlamvu ezinemibala. Ukukhiqiza amafonti amasha e-Instagram, vula inkundla, bhala noma unamathisele okuqukethwe kwakho, kubuke ngamafomethi ahlukene, kopisha ingcaphuno ngefonti oyifunayo bese unamathisela umbhalo ku-Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, Twitch, TikTok noma yimuphi inethiwekhi Social. Kukhona nezinye izingosi ezinikeza isevisi. Ngu… ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Izinhlamvu nezinombolo. Ukuthola amafonti oqobo e-Instagram, vula ithuluzi, bhala noma unamathisele ibinzana lakho, libuke ngamafomethi ahlukene, kopisha ingcaphuno ngefonti oyifunayo bese unamathisela umbhalo ku-Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, Twitch, TikTok noma yimuphi inethiwekhi Social. Kukhona nezinye izindawo ezinikezela ngenkonzo. Ngu… ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Uma ungakayizwa inkulumo ethi Stalking okwamanje, noma ukuba ne-Instagram Stalkers, sizokutshela ukuthi iyini. Yigama leminyaka eyinkulungwane, elisetshenziselwa ukubiza bonke labo bantu abasihlola ngezinkundla zokuxhumana. Sonke siye saba ngabaqaphi ngesinye isikhathi. Ngakho-ke, ngeSpanishi, ukuthungatha kungaba into efana... ufunde kabanzi
Kusho ukuthini uK ku-Instagram
Thenga Abalandeli! Ku-Instagram, sizithola sinemibuzo efuna ukwazi kakhulu, kodwa enye yezinto ezivame kakhulu futhi yakamuva endaweni yesikhulumi okushiwo u-K ku-Instagram. Futhi kungenxa yokuthi, lapho usebenzisa inkundla yokuxhumana nabantu okokuqala ngqa uzobona ukuthi kunezici eziningi nemisebenzi ezokushiya nezimbalwa ... ufunde kabanzi
Imiyalezo emihle yokusa
Thenga Abalandeli! Eminyakeni yamuva nje, kuye kwaphawulwa ukuthi izinga lamasiko liye lehla kanjani emhlabeni wonke, imithetho yenhlonipho, into eyisisekelo njengezindinganiso, inhlonipho kanye nokunikeza imiyalezo yokubingelela ibilokhu iyancipha, ingasho ukuthi isilahlekelwe ngokuphelele. Ingxenye yecala... ufunde kabanzi
Kwenzekani lapho uvimba umuntu ku-Instagram?
Thenga Abalandeli! Kokuthunyelwe kwanamuhla sikutshela ukuthi kwenzekani uma uvimba umuntu ku-Instagram. Eminyakeni yakamuva, i-Instagram aka Insta ithathe umhlaba ngesivunguvungu, futhi manje iningi labantu liyayithanda. Kusukela ekuvuseleleni ubungane bakudala kuye ekubekezeleni othile okuthumela umugqa wesikhathi ogaxekile,... ufunde kabanzi
Susa i-akhawunti ye-Tinder
Thenga Abalandeli! Uma uhlelo lwakho lokusebenza lokudlala ngothando seluvele luwufezile umsebenzi walo, usuvele uthole uzakwethu, noma ufuna ukungashadi futhi ubuyele kokwesiko, sizokutshela ukuthi ungayisusa kanjani i-akhawunti ye-Tinder. Uma usukhathele ukuswayipha ku-Tinder, ungasusa i-akhawunti yakho. Ukwenza kulula kakhulu. Funda ukuze ufunde ukuthi kanjani… ufunde kabanzi
Kusho ukuthini inhliziyo ku-instagram
Thenga Abalandeli! Kusukela ekuqaleni kwe-instagram njengohlelo lokusebenza ngo-2010, kuze kube manje. Amazwana, ukuthanda, abalandeli nokuthunyelwe kube yingxenye yenkundla. Ngokungafani nezinye izinkundla, isithonjana esimele ukuthandwa sihluke kancane. Ngenkathi sikwezinye izinkundla, njenge-Facebook, singathola… ufunde kabanzi
Ngabe ukulandela ku-Instagram kusho ukuthini?
Thenga Abalandeli! Abantu abaningi ngokwengeziwe bajoyina izigidi zabasebenzisi i-Instagram enazo. Ngakho-ke, izinhlobonhlobo esingazithola kulolu hlelo lokusebenza zihlobene namasiko avela emhlabeni wonke ongawalandela futhi abuyele kuwe. Kodwa mhlawumbe uma usenjinini yokusesha u... ufunde kabanzi
Landa izindaba ezindala ze-Instagram
Thenga Abalandeli! I-Instagram iyinethiwekhi yokuxhumana nabantu ehloselwe ukwabelana ngezithombe namavidiyo; eshicilelwa ngokuvundlile nangokuqondile. Kuyinkundla entsha evumela ohlomulayo ukuthi andise ukuxhumana kwabo kuzo zonke izingxenye zomhlaba ngezithombe namavidiyo, phakathi kokunye, ngamathuluzi atholakala ku-Google Play Isitolo (Android) noma i-IOS (Iphone) kanye… ufunde kabanzi
Thenga Abalandeli! Izinhlamvu kanambambili. Ukuthola amafonti amasha e-Instagram, vula ithuluzi, bhala noma unamathisele okuqukethwe kwakho, ukuveze ngezitayela ezahlukene, kopisha ingcaphuno ngefonti oyifunayo bese unamathisela umbhalo ku-Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, Twitch, TikTok noma yimuphi inethiwekhi Social. Kukhona nezinye izindawo ezinikezela ngenkonzo. Ngu… ufunde kabanzi
Ubani obone iphrofayili yami ku-Instagram?
Thenga Abalandeli! Kwabaningi bethu, i-Instagram ikwazile ukusithatha, kangangokuthi sabelana ngengxenye enkulu yezimpilo zethu kule nkundla yezokuxhumana futhi ngenxa yaleso sizathu, kuvela ilukuluku lokwazi ukuthi ubani obone iphrofayela yami ye-Instagram. Ukwazi ukuthi ubani osihlolayo, noma uma sine-akhawunti yebhizinisi, bangaki abantu… ufunde kabanzi
I-Aesthetic Letter Converter
Thenga Abalandeli! Isiguquli sezingoma zobuhle. Ukukhiqiza amafonti amasha e-Instagram, vula inkundla, bhala noma unamathisele okuqukethwe kwakho, ukuveze ngezakhiwo ezahlukahlukene, kopisha ingcaphuno ngefonti oyifunayo bese unamathisela umbhalo ku-Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, WhatsApp, Twitch, TikTok noma yimuphi inethiwekhi Social. Kunamanye amakhasi anikezela nge… ufunde kabanzi
Lapho i-Instagram isho ukuthi iyasebenza manje
Thenga Abalandeli! Ngezibuyekezo ezintsha ezisetshenziswe yi-Instagram, sibone izici ezithile ezithuthukise ukuxhumana nokuthuthukiswa endaweni yesikhulumi. Lapho i-Instagram ithi iyasebenza manje ukukhombisa isimo sokuxhuma somuntu noma somsebenzisi enkundleni yokuxhumana nabantu. Ngenxa yalokhu, ukuxhumana nokuxhumana kulula, ikakhulukazi… ufunde kabanzi
Ikhasi1 Ikhasi2 ... Ikhasi303 Okulandelayo →
Ungaxhumanisa kanjani iTwitch Prime ne-GTA
Uyenza kanjani i-poll ku-Twitch
Ungayisebenzisa kanjani i-smartwatch ngendlela efanele
Izobukeka kanjani i-OnePlus 10 futhi izothengiswa nini?
Ungawuthuthukisa kanjani umsindo ku-Yandex.Station
Ukungena ngemvume kwakamuva
© 2022 - Abalandeli ▷➡️
I-Creative Stop Tutorials yemidlalo
Indlela Yokufundisa Nezixazululo